Uzinzo lwezeMali | Ezezimali
Ukuzimela kwezezimali kukukwazi kwenkampani okanye umntu ukuba angaxhomekeki kwimali yomntu ukuze anelise iinjongo zakhe. Imilinganiselo yoqoqosho isisebenza njengesixhobo esikhulu sokuphendula ukuhlalutya iimeko zoqoqosho ezinokuba "zinzima" kwasekuqaleni. Ke ngokujonga nje kuphela sinokubona ukuba kulula kangakanani okanye kufanelekile yintoni ebalwayo. Kule meko kunye nenqaku, siza kuchaza yonke into malunga nomyinge wokuzimela kwemali.
Emva kokufunda inqaku, Uya kuba nombono opheleleyo malunga nokuba yintoni umlinganiso wokuzimela kwemali, indlela yokubala kunye neziphumo zayo kwinkampani. Ndiyabulela kule ratio, izigqibo ezinokuthi zithathwe zinokuqina ngakumbi umlinganiso. Ngokuchasene noko, izigqibo ezimbalwa ziyaqwalaselwa ezinokuthi zenziwe ukuba inqanaba lokuzimela kwemali liphantsi. Ikwasebenza njengesixhobo sokuba iinkampani zibala njani ukuba zenziwe kakuhle kangakanani na izixhobo zazo zichasene namatyala. Ukuyiqonda ngokupheleleyo, qhubeka ufunda de kube sekupheleni.
1 Yintoni umlinganiselo wokuzimela kwemali?
2 Ifomula yokubala umyinge wokuzimela kwemali
3 Utolika njani umlinganiso?
3.1 Ukunyuka kwetyala kuwuchaphazela njani umlinganiselo?
Yintoni umlinganiselo wokuzimela kwemali?
Umlinganiselo wokuzimela kwemali izama ukuchaza ukuxhomekeka kwenkampani kubantu ekubabolekisaOko kukuthi, kulowo unetyala kuye, ityala. Olu balo luhamba ngokumisela ubulungisa inkampani enayo ngokunxulumene namatyala ayo. Ngokulandelanayo, umyinge usinika ubudlelwane nokukwazi kwabo ukuboleka. Ukunyuka kwalo mlinganiso, kokukhona inkampani inakho ukuphila kwixesha elizayo, ngakumbi ithathela ingqalelo into yokuba ukungaqiniseki kunokuvela ngaxa lithile. Umzekelo olungileyo ungangummandla esihamba kuwo ngoku apho ubhubhane ubeka khona le milinganiselo kuvavanyo. Iinkampani ezinomlinganiselo olungileyo wokuzimela zisengozini yokuchaphazeleka kancinci kunalezo umyinge wazo ungathandekiyo phambi kweengxaki ezinokubakho.
Abanye abantu basebenzisa amagama "ukulingana" ukuze bathi "Ubulungisa", ayinamsebenzi. Into ebalulekileyo kukuba nokuba sisebenzisa elinye okanye amanye amagama siza kubhekisa kwinto enye. Kule meko, ukuze wazi ubulungisa, kufuneka ususe inani lamatyala (ityala) kwiiasethi zizonke.
Ifomula yokubala umyinge wokuzimela kwemali
Njengoko besesiphawulile ngaphambili, bubudlelwane phakathi kokulingana kunye namatyala. Ifomula ibalwa Ukwahlulahlulwa kwezahlulo kumaTyala ewonke (ityala) kokubini ixesha elifutshane kunye nelide. Inani elikhokelela kwinani lokuzimela kwemali. Ukuze uyiqonde ngcono, siza kwenza umzekelo neenkampani ezimbini esicinga ukuba zivela kwicandelo elinye. Umzekelo, iinkampani ezinikele ekuthuthweni kwabantu.
Kwimeko yokuqala, sifumana inkampani ene-equity yayo iyonke imali eyi-1.540.000 ye-euro. Ityala lalo lonke lixabisa i-2.000.000 ye-euro. Oku kuthetha ukuba sahlula-hlula iimali zabo ngamatyala abo, oko kukuthi, amatyala abo, sifumana i-0,77. Oku kuya kuba ngumlinganiselo wokuzimela kwemali.
Kwimeko yesibini, sinenkampani encinci ngobukhulu kwaye ine-equity ye-930.000 ye-euro. Emva koko sinetyala lakhe lilonke lifikelela kwii-euro ezingama-240.000. Emva kokwahlulahlula i-equity kwityala laso, sifumanisa ukuba linomlinganiso wokuzimela kwemali we-3,87.
Kule meko kunye nomzekelo, ndizamile ukubeka ityala "elidumileyo", umzekelo wesibini. Kwelinye icala, siza kubona ukuba umlinganiso wenkampani yesibini uphezulu kangakanani, nge-3. Kuzinzile ngokwasezimalini, akukho mathandabuzo. Nangona kunjalo, inokukhula ngakumbi ngakumbi, kodwa konke oko kunokwenzeka kuya kubakho ngendlela efihlakeleyo, ngekhe kuyisebenzise.
Utolika njani umlinganiso?
Ngokubanzi, inkampani ithi ikwazi ukuzimela geqe xa ingaphezulu kwesiqingatha sezixhobo zayo ivela kwiingxowa-mali zayo. Kodwa ukufumana umbono, elona nani lincinci lalo nani kulindeleke ukuba inkampani ibe nalo li-0 okanye ngaphezulu. Umyinge ophakathi kwe-0 no-7 "ngesiqhelo" ngowona uqhelekileyo kunye nelona xabiso liphezulu.
Kwelinye icala, inkampani iya kuba nemali kunye nezixhobo zokujongana namaxesha anzima. Le mizuzu isenokungabi nzima kakhulu, kodwa ukuthoba unyawo nokuzithemba kakhulu akusoloko kukhokelela kwiziphumo ezilungileyo. Kwelinye icala, ngekhe sithethe ngamatyala amakhulu kakhulu, okuthetha ukuba inakho ukuzimela kakuhle kwezemali kwaye xa kukho isidingo okanye utyalomali ayizukubeka ukusinda kwayo emngciphekweni. Ngesi sizathu, ukuba okanye ukuzama ukugcina umlinganiso ophezulu kubaluleke kakhulu, njengoko kubonisa umqondiso wamandla nozinzo.
Njengedatha, kufuneka yongezwe ukuba akukho mlinganiselo wokuzimela kwemali osebenzayo kuzo zonke iinkampani. Icandelo ngalinye lahlukile, kwaye aliyi kuxhomekeka kwicandelo osebenza kulo kuphela, kodwa kukhuphiswano nakwiinjongo zeshishini zangoku zomzuzu ngamnye.
Ukunyuka kwetyala kuwuchaphazela njani umlinganiselo?
Ukuthathela ingqalelo imizekelo yeenkampani ezimbini ezichazwe apha ngasentla, sinokubona ngakumbi ukuba inkampani yesibini inokuboleka kangakanani. Makhe siyibone ngendlela eyiyo. Ukuba i-1 yezigidi ze-euro iceliwe kutyalo-mali kunye / okanye ukuthengwa kweeasethi, ixabiso lenkampani liya kunyuka lisuka kwi-1.170.000 ye-euro (ii-asethi zayo ngaphambi kokucutha ityala ukuze wazi ixabiso) ukuya kwi-2.170.000 ye-euro.
Ityala liya kunyuka liye kwi-1.240.000 ye-euro (i- € 240.000 kunye ne- € 1.000.000 eyongezelelweyo). Ixabiso lakhe lilonke liya kuhlala liyi- € 930.000. Oku kuthetha ukuba umda wokuzimela kwemali uza kuba yi-930.000 ye- € eyahlulwe nge-1.240.000 ye- € iya kuba yi-0. Iphantse yafana, njengoko kunjalo kwinkampani yokuqala.
Ngokucacileyo oku kubalwa kulula ngamanani ajikelezayo, kwaye enyanisweni iikhomishini kunye neerhafu ezivela kumatyala kunye nokufunyanwa kweeasethi kuya kufuneka zinikwe isaphulelo kwiiasethi zizonke. Kodwa xa kuziwa ekusebenziseni ukusebenza koqoqosho, siyabona ukuba ngoku inkampani yesibini iphantse yaphindeka kabini ngobukhulu. Ke ngoko, ingeniso yakho iya kuba phezulu kwaye ukuhamba kwemali okusebenzayo kuya kunyuka, kukuvumela ukuba ukhule ngakumbi kunangaphambili. Kwangelo xesha, iya kuhlala inezinto zayo zokujongana nomzuzu onzima, kodwa umlinganiso wokuzimela ubonisa oko Ukuboleka ngaphezulu kunokuba yingozi kwaye akunconyelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Uzinzo kwezemali